TSMC's A9 machipisi anoshanda zvakanyanya kupfuura Samsung's | IPhone nhau
TSMC's A9 machipisi anoshanda zvakanyanya kupfuura Samsung
Musi waSeptember 29 takakupa nhau idzo dzakashandiswa ne iPhone 6s uye iPhone 6s Plus maviri akasiyana A9 machipisi. ari A9 chip TSMC ndeye 16nm uye Samsung iri 14nm, iyo Chinese modhi iri ingangoita 10% yakakura kupfuura iyo yeKorea femu yemhando. Saizi haina kukosha, nekuti iri mukati uye hatizozvione, asi chatinga netseke nezvayo ndeye kuita kana kugona. Kuve iyo TSMC A9 ye16nm uye yakakura, zvese zvakaita kuti tifunge kuti chip chayo chingatipa kuzvitonga kushoma.
Dzidziso chinhu chimwe chete, asi chinhu chakakosha chinogara chichiitwa. Sezvo isu tichigona kuverenga mukati Reddit kana mumaforamu akasiyana siyana, tsika inotiratidza zvakasiyana mhedzisiro. Iyo iPhone 6s / Plus ine A9 processor ye TSMC inoratidza mabhenji epamusoro zvishoma kune avo veSamsung iyo, kunyangwe kana iri diki, isu tinotopinda mudambudziko rekuve nezvakawanda kana zvishoma zvabhadhara zvakafanana.
Asi kushamisika kukuru hakusi mukuita, kana zvisiri mukubudirira. Kunyangwe hazvo Korean A9 iri 14nm uye iyo yechiChinese iri 16nm, iyo TSMC chip inoshanda kupfuura Samsung modhi, zvinoreva kuti inoshandisa mashoma simba. Iyo iPhone 6s / Plus ine Samsung chip ichadya 20% kupfuura iyo iPhone 6s / Plus ine TSMC processor, saka zvichienderana nebasa ratiri kuita, panogona kuve nemusiyano we2h yekuzvitonga mukufarira Chinese processor.
Mhedzisiro iyi inongoratidzira chete kuti Apple haina kunaka kushandisa maviri akasiyana zvikamu mune imwecheteyo kifaa. Chii chinozoshanduka chishuwo chevashandisi vazhinji avo pakutanga vakafunga kuti zvaive nani kuwana Samsung processor mune rotari uye ikozvino ivo vachasarudza TSMC's.
Kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi processor yauinayo, iwe unogona kuzviita pamwe nekushandisa Lirum Chidimbu Info Lite. Kune iwo mamodheru eSamsung, tichaona mhedzisiro yeN66AP yeiyo 6s Plus uye N71AP yeiyo 6s, nepo yemhando dzeTSMC tichaona N66MAP yeiyo 6s Plus uye N71MAP (yeiyo 6s).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » TSMC's A9 machipisi anoshanda zvakanyanya kupfuura Samsung
Zvakanaka! iwe wakakwira wakatsamwa muzuva rayo nekuti chip yaive 2 nm diki, uye kana iwe ukatenga chakanakisa, iwe waida chakanakisa, blah blah blah ... uye ikozvino unouya kwandiri nenyaya yekuti saizi hachisi chinhu chakakosha, kuti haina kana kuoneka mukati mechigadzirwa.
Ndeapi mabhuru pamusoro pehukuru, uye ndeapi mabhuru pamusoro pekumhanya kwechip
Hi toño. Kutsamwa panguva iyoyo kwaive nekuti kune vaviri vakasiyana vane kuita kwakasiyana kana kuzvitonga. Saizi yakapusa, asi kushanda kwayo hakusi. Uye izvo zvichiri kutaridzika kunge zvisirizvo kwandiri, izvo zvandinoisa muchinyorwa.
Ini ndinowedzera kujekesa kuti nanometer haina kukura, asi maitiro ekugadzira.
Zvakanaka, ndakaverenga ruzivo rwese iwe rwakatipa uye ini pachangu ndinofarira Samsung processor. Ini ndaigona kumaka technical roll yekuti nei ndakasarudzira processor iyoyo asi harisi zano futi. Uye hongu, saizi ine basa, pamusoro pezvekuti ruzivo rwunopihwa mune izvi zvinongedzo haruna kuvimbika zvachose uye mhedzisiro chete yandinogona kutora mushure mekuona mhando yemayedzo avakaita, kana kusimbisa kana kuramba kuti ndeupi wevagadziri vaviri iri . Mumwe nemumwe kutaura zvavanoda uye kutenga nhare yavanoda. Asi kudzamara inzvimbo yakanaka yaita RUDZIDZO bvunzo; ruzivo rwakadai haruna kundiudza chero chinhu. Zvinoita sekunge isu takagumisa kuti chimwe chinhu ichokwadi mushure mekuverenga hurukuro pane mota forum tambo.
Kwazisai uye endererai nebasa rakanaka.
iPhone 6S Uyezve neTSMC !!! Ndinovimba iri kunyatsoita basa !!! Kunyangwe ndaifunga kuti ichashanda zvakanyanya asi kwete nekukurumidza kupfuura Samsung! Kana iwe ukawana chero rumwe ruzivo pane iyo nyaya ... Shambadzira iyo !!!
Ehezve, ikozvino isu tese tinofanira kudzikama handiti, ndeipi nzira yekuda kugeza maoko ako, 14nm inoshandisa zvishoma, Apple inozvishongedza senguva dzose, kuzara.
Mhoroi munhu wese, ini ndinowanzo kuve joko sezvo tiri kutaura nezve € 1000 mafoni
Ndine ma6 akatengwa kuUK uye anouya neiyo Samsung 14nm….
Une iyo Samsung handiti ??? Hazvina kuipa here, nekuti bhatiri rinogara rakafanana kana rakareba kupfuura mu6 Plus ??? Zvakanaka, usafunge kaviri ... ndakaenda kuFrance kunotora yangu uye ndine "rombo rakanaka" kuva neTSMC, kunyangwe pakutanga ndaida kuve neveSamsung nekuti ndaifungira kuti zvaive nani ... Asi dai ndawana iyo Samsung imwe, handidi ndaizoipa yakawanda, zvakare iwo miedzo yaizofanirwa kutariswa negirazi rinokudza uye kumirira imwe mhando yemuyedzo wakasimbiswa zvakanaka kuitwe ... Zvinoenderana nekushandisa isu tinozvipa, zvirokwazvo zvinosiyana ... iwo mablog ayo iyo yangu Plus yaaizokotama nekungotarisa uye hapana zvakadaro !!! Ini ndinogara ndichizvipfeka mujean rangu uye ndisina chifukidziro senge yangu 6S Plus izvozvi uye hapana kana zvachose ... Nakidzwa nechigadzirwa chiri cucumber, chakanakisa kudanana, hapana chinhu chiri nani pamusika, chero Soc yandinopfeka, Ndine chokwadiwo kuti 90% yenyu hamutore kunyange 30% yehuwandu hwekuita kwechigadzirwa !!! Nakidzwa nayo !!!!
Mhoroi, ndine iyo iPhone 6 pamwe kubva pakutanga uye ini ndinongopa yangu yekuzvininipisa maonero. Ini ndinoda Apple senge zvakanyanya asi ini ndinofunga vari kuita zvinhu zvisirizvo muzvinhu zvakati wandei uye chimwe chazvo ndeichi. Kana iwe ukakwirisa chip isa zvakafanana mune zvese, ingave imwe kana imwe, ichokwadi kuti ese ari maviri anoshanda nemazvo asi kana uchizobhadhara 1000 euros yefoni, hushoma hwaunoda kuve hwakaenzana nemuvakidzani wako. , kana kuwanda kana kushoma. Zvinovabhadhara zvakanyanya here mushure mekuita bvunzo uye miedzo kuti uone kuti ndeipi inoshanda zvakanyanya wozoisa iyo mukugadzira kune wese munhu? Ini ndinofunga Apple yakajairwa kuregererwa kune mazhinji aripo kukanganisa kwezvose zvaakaita muhupenyu hwayo uye izvo hazvigone kudaro. Ndokumbirawo vanababa veApple vaise mabhatiri uye sezvo ivo vachichaja izvo zvavanobhadharisa uye vane vakavimbika vatengi uye vangangove vatengi vatsva kuti isu tinoramba tichidada nezvezvigadzirwa zvedu zvehunhu hwavo uye kwete nekuti vanotakura apuro. Ndinosiya zvangu kuzvininipisa. Kwaziwai!
hapana kana ma processor maviri aya anobva kuChinese mavambo, TSMC ndeyeTaiwanese uye Samsung chiKorea.
Zvakanaka, ini handiwane zita rechip, pamwe neicho chishandiso, ndinozviita sei?
Apple inobvumira kushambadzira blocker inoshanda neIOS 9 uye inovharira zvemukati mumapurogiramu eko.
Belkin Inotangisa Charge Dock ye iPhone uye Apple Watch